> Resource > Ladnaansho > Lenovo Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Lenovo
Ma suurto gal in ay dib u soo ceshano Xogta laga Laptop Lenovo?
My Lenovo IdeaPad Y480 hoos ku xidhay shalay lama filaan ah. Oo markii aan u rebooted, faylasha qaar ka mid ah ayaa laga badiyay. Anigu ma aan aqoonin waxa ka khaldan, laakiin run ahaantii waxaan u baahan tahay dib u files aan. Waxaan aaminsan inay weli tahay meel aan laptop Lenovo. Laakiin waxaan kaliya ma garanayn sidii ay u hanato. Qof i caawin kartaa fadlan?
Laptop Lenovo waa ku weyn yahay. Laakiin xogta waxaa weli lagu lumin karaa sababo kala duwan. Laga yaabaa inay noqon kuwa khasaaray sababtoo ah shil ama ula kac ah u tirtira, nidaamka shil, formatting drive adag ama jeermiska fayraska. Sidaas, sida inuu ka soo kabsado xogta lumay ka laptop Lenovo?
Waxaa jira xalal badan oo run ahaantii. Mid ka mid ah xalka ugu fiican in aad isku dayi kartaa waa Wondershare Data Recovery , barnaamij soo kabashada xogta Lenovo taas oo ka caawisa in aad ka bogsato tirtiray, formatted, files burburtay ka wadid aad Lenovo laptop ee adag. Waxaad effortless karaa dib u soo ceshano xogta sida sawirada, files audio, videos oo dheeraad ah oo ka laptop Lenovo.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijkan ka hooseeya si ay u bilaabaan soo kabashada xogta laptop Lenovo hadda.
Qabtaan Lenovo Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery aad laptop Lenovo, aad arki doonaa suuqa kala bilaabatay sida image hoos ku soo bandhigay. Waxaad marka hore qaadan kartaa "lumay Recovery File" sida isku day ah.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab in xogta aad ka lumay
Tallaabada 2 xijaab Scan aad laptop Lenovo
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad xogta lumay ee xijaab asalka ah oo guji "Start" si ay u bilaabaan iskaanka for files laga badiyay.
Wixii iskaanka xogta lagu formatted, fadlan dooro "Enable Deep Scan" furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka laptop Lenovo
In dhamaadka, ka helay waxyaabaha ku hadlo xijaab aad Lenovo laptop oo dhan lagu soo bandhigi doonaa ka dib markii iskaanka. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad u aragto magacyada file in lagu hubiyo sida badan files waxaad awoodi doontaa inaad dib u hanato.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad files doonayo oo ka dhacay on "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin aad laptop Lenovo badbaadiyo.